Sunday July, 05 2020 - 21:53:51
Friday May 22, 2020 - 11:11:17 in by salman abdi
Dastuur hoosaadka Hong Kong wuxuu dhigayaa iney Hong Kong awood u leedahay iney soo saarto shuruucda amniga lagu ilaalinayo loogana hortagayo "Khiyaamo qaran, gooni iisu taag iyo kacdoon".
Golaha Koongareska qaranka ee Shiinaha wuxuu inta badan meel mariyaa go'aannada ka soo baxa hogaanka sare ee xisbiga hanti wadaagga Shiinaha.
Hong Kong "waa ismaamul gooni ah" oo hoos taga Shiinaha, waxaana loo arkaa "hal dal oo haddana laba nidaam ku dhaqamaya" tani iyo marki ay xorriyadda Hong Kong dib u soo celisay Britain 1997-kii.
Dadka u ololeeya dimuqraadiyadda ayaa cabsi weyn ka muujiyey sharcigan uu Shiinaha gadaal ka riixayo ay ku sheegeen "dhammaadkii Hong kong", meeshana ay ka baxayso madaxbannaaidi gobolka iyo xorrriyadda.
Dennis Kwok wuxuu sheegay "haddii ay arrintan sideeda u dhacdo waxaa si rasmi ah meesha uga baxayo nidaamki ahaa 'hal dal iyo laba nidaam'.
Jshua Wong wuxuu bartiisa tweetarka uu ku qoray tallaabbadan ay Beijing qaadeyso iney tahay "mid lagu aamusinayo shacabaka Hong Kong' wuxuuna noqonayaa mid shacabka xoog iyo cabsi iney ku aamusaan lagu doonayo.
Ila wareedyo u warramay wargeyska South China Post wuxuu yiri "Mar dambe uma oggolaan doonno ficillada sida sumcad-xumida calanka dalka Shiinaha loo geysto ama dhaawaca sumcadda dalka looga geysanaya Hong Kong".
Zhang Yesui wuxuu sheegay talalabbada ay Beijing waddo inuu sii "hagaajinayo", halka dal iyo labada nidaam.
Xisbiga DAB ee ay taageerto Beijing "si buuxda ayuu u taageeray" qorshahaasi, iyaga oo sheegay inuu sharcigan "uu jawaab u noqon doono xaaladda siyaasadeed ee sanadaha cakirneyd ee Hong Kong.
Dowladaha Shiinaha iyo Britain ayaa saxiixay heshiis looga magac daray, heshiiska wada jirka ee Sino-British, iyaga oo ku heshiiyey iney Hong Kong ay noqoto mid leh madax bannaani aad u sarreysa marka laga reeba arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga", muddo 50 sana ah.
"Waa Sharci Daro Go,aankii Ay Shalay Galaha Wakiiladu Soo Saareen "Garyaqaan Mubaarig Aar
01/07/2020 - 13:05:46
Xildhibaan Soo Jeediyey Inaan Xukuumaddu Si Gaar Ah Ugu Amar Ku Taaglayn Awoodda Sharci Ee Dalka
01/07/2020 - 10:08:31